CS:ဖီတီပန်းချီသို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ် GO | Best Betting Sites CSGO | Best CSGO Betting
အောက်တိုဘာလ 10, 2016
မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏အမှတ်အသားထားခဲ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့နာမည်ကျော် Counter-Strike ရေးခွအင်္ဂါရပ်, ပြိုင်ဘက်အာရုံ, တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကို amuse, Counter-Strike ဘို့ Valve အားဖြင့်နောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့ပါပြီ: GO. ထိုဂိမ်း၏ယခင်ကြားမှာအတွက်အင်္ဂါရပ်အခမဲ့ရရှိနိုင်ခဲ့စိတ်ကြိုက်နိုင်စဉ်, အဆိုပါမှုန်ရေမွှားအနည်းငယ်လမ်းညွှန်ချက်များ. They’re available for sale now on OPSkins.com
ယခင် Counter-Strike အရစ်ကျ, ကစားသမားစွဲချက်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ - ယခုသူတို့သာရှိသည်နိုင် 50. စွဲချက်ကိုလောင်နေကြတယ်ပြီးနောက်, ကစားသမားသစ်တွေဆည်းပူးဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်, ကတက်အဆင့်ဖြင့်အပတ်စဉ်ထုတ် In-ဂိမ်းတစ်စက်၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်, ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ရေးခွ boxes တွေကိုတဆင့်, သို့မဟုတ် OPSkins တစ်ဦးထံမှတစ်ဦးချင်းစီရေးခွ purchasing အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ရေနွေးငွေ့ Market ကတဆင့်.
Counter-Strike ၏အတိတ်ဗားရှင်းသင် web ပေါ်မှချင်တယ်ဆိုပုံရိပ်နှင့်အတူထုံးစံရေးခွဖနျတီးဖို့ခွင့်ပြု (သူတို့ပင် R-rated ပုံရိပ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ဂိမ်းရဲ့ဖိုင်တွေထဲမှာ folder တစ်ခုသွားအဲဒီမှာက paste လုပ်လိုက်ပါအားဖြင့်. သင်ကအရင်းအမြစ်ပုံရိပ်အဖြစ် .gif file ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နှင့်ဆာဗာက Moderator သို့မဟုတ်ကစားသမားသူတို့ကိုမြင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ရေးခွမှကာတွန်း add နိုင်, သူတို့ကအင်္ဂါရပ်ကို turn off နှင့်နေဆဲကစားရန်တတ်နိုင်ဖြစ်နိုင်.
ယခု, ရရှိနိုင်ရေးခွပုံစံများနှစ်မျိုးရှိပါတယ်: မိုနိုခရုမ်နှင့် Multi-ရောင်စုံ. ပထမဦးဆုံးအသင်တစ်ဦးရာထူးတက်ရေစက်ကဲ့သို့ဆည်းပူးနိုင်ပြီးအဆုံးစွန်သောတစ်ဦးရေးခွ box ရဲ့ဝယ်ယူမှုအားဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. အရေးခွ box ကိုအရောင်းအနေဖြင့်ဝင်ငွေရရှိမှု၏အစိတ်အပိုင်းပုံစံများနောက်ကွယ်မှအနုပညာရှင်များရပ်ရွာမှသွားပါလိမ့်မယ်, သောသူတို့သည်အနာဂတ်၌အသစ်လုပ်ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်နိုငျကွောငျးကိုဆိုလို. ပုံစံများနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများလည်း OPSkins သို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့စျေးကွက်အပေါ်ကုန်သွယ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါရေးခွဒီဇိုင်းများအများအားဖြင့်ယခင်ကလက်ရှိစတစ်ကာဒီဇိုင်းများအပေါ်အခြေခံထားတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အနာဂတ် Valve အထူးထုတ်ဝေပြိုင်ပွဲရေးခွထွက်လှိမ့်စေခြင်းငှါယူဆနိုင်. စိတ်ဝင်စားစရာလုံလောက်, အမှန်တကယ်ရေးခွပုံစံများတယောက်ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဖို့အတိတ်ကာလကပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရဖို့ခဲ့သောအငြင်းပွားဖွယ်မြည် Dawn ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထား; ဒါကြောင့်ကိုယ့်အနာဂတ်မှာစျေးကွက်အပေါ် ပို. စျေးကြီးမှုန်ရေမွှားများ၏တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ထွက်လှည့်စေခြင်းငှါ,.
Valve ၏ Image ကိုယဉ်ကျေး
သူတို့ဆန္ဒရှိတိုင်းမှုန်ရေမွှားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံလျှောက်ထားရန်သကဲ့သို့သူတို့အတွက်ဂိမ်းသူတို့ကိုအကူးအပြောင်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကစားသမားအဖြစ်အများအပြားပုံစံများတပ်ဆင်နိုင်, သူတို့သာတစ်ကြိမ်ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်တိုင်းကိုလေပေါ်မှာပနိုင်ကြသည်ပေမယ့် 45 စက္ကန့် (ပိုမိုမြန်ဆန်လာကိုမဆို) ကပယ််လည်းကြွေတတ်သည့်တိုင်အောင်နှင့်ရေးခွယင်းလျှောက်ထားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခုနစ်မိနစ်ကြာရှည်ဦးမည်. Valve ၏အဆိုအရ: "ကစားသမားပတ်ပတ်လည်နှုန်းတခါရေးခွလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်တိုင်း 45 စက္ကန့်, တိုတောင်းသည်ကိုမဆို. တစ်လှည့်လည်-based ဂိမ်း mode မှာတစ်ဦး, kill ရယူခြင်းကစားသမားပိုပြီးရေးခွလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ "
ကစားသမားသူတို့အပျေါမှာလေပေါ်မှာဖို့ကြိုးစားပါတယ်သည့်အခါရေးခွလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ရှိရာမြေပုံအပေါ်မျက်နှာပြင်အရေးခွတစ်ဦး preview ကိုပြသပေးမှာ. မျက်နှာပြင်တစ်ဦး preview ကိုမပြပါဘူးဆိုရင်ထို့နောက်ကစားသမားကျော်ရာဖီတီပန်းချီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
| Tags:: back, csgo, graffiti post navigation
← HOT ကစားတဲ့ Betting | Blackjack | လက္ေဆာင္ကုဒ္ | 500 CREDITS အခမဲ့ | ယံုျကည္စိတ္ခ်ရ	CaseRandom – CSGO Skins မ်ားရယူရန္:အေကာင္းဆံုးေနရာ!! →